I-WTVision Izihlobo kwi-Ultimatte yezeMali yokuSebenza yeAugmented ngexesha loNyulo lwePanama | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-WTVision Izihlobo kwi-Ultimatte yomsebenzi weNxalenye yezahlulo zeXesha elidlulileyo ngexesha loNyulo lwePanama
I-WTVision Izihlobo kwi-Ultimatte yomsebenzi weNxalenye yezahlulo zeXesha elidlulileyo ngexesha loNyulo lwePanama
UFremont, CA - Agasti 13, 2019 - Blackmagic Design namhlanje ubhengeze ukuba i-Ultimatte, iprosesa yayo yangempela yokwenziwa kwexesha, isetyenziswe yi-WTVision yokuvelisa okwenyaniweyo (i-AR) kunye nokuqonda okugcweleyo kwemizobo ngexesha losasazo lwePanama ye-2019 primaries, ipalamente kunye nokhetho lukamongameli kwiTVN. Blackmagic DesignStudio yeTV yeTV HD iswits yokuvelisa bukhoma kunye nokunye kwasasetyenziselwa ukwenza ukuhanjiswa komsebenzi okunokuthenjwa okugcine ilizwe linolwazi, kuboniswa iziphumo zexesha lokwenyani, iingqikelelo kunye nesiphumo sokugqibela sonyulo ngendlela edibeneyo.
I-TVN, inethiwekhi kamabonakude esekwe ePanama, edibene neWTVision, inkokheli kwimizobo yexesha lokwenyani, i-AR kunye ne-playout ezenzekelayo, kunyulo ngenxa yamava eWTVision ebanzi ebaleni. Ngeeofisi ezininzi emhlabeni jikelele, iqela elisekwe kwi-WTVision laseColombia lalinyulelwe iprojekthi kwaye lafuneka ukuhambisa Blackmagic Design ukuhamba komsebenzi kwi-ofisi yakhe eseColombia ukuya kwizitudiyo ePanama apho kwakusasazwa unyulo.
Njengoko iivoti bezibalwa kubagqatswa abangena ezihlalweni zepalamente, iWTVision ibonakalisa iwina ngexesha langempela ngokwenza "izihlalo ezimhlophe" umzobo obonisa izihlalo ezahlukeneyo kwindlu yowiso-mthetho. Njengokugqitywa kokuphumelela kwesihlalo ngasinye, imizobo yatshintshela kumbala ohambelana neqela eliphumeleleyo.
“Besifuna ukwenza into entsha nekulula ukuyiqonda ababukeli. Ngamanye amaxesha ukujonga nje amanani kuyasixaka kwaye kuyasidida, ke ngokubonisa iziphumo nezihlalo, siye sakwazi ukubonisa into esisebenzayo. Nge-Ultimatte, sikwazile ukucola izihlalo ezikwiseti ebonakalayo ngaphandle kokuba izinto ezibonakalayo zidibane kwaye zitshabalale okanye zibhukuqane, ”ucacisile uKossowski.
Kwangokunjalo, kunyulo lukamongameli, i-wTV yayila imephu emhlophe yePanama, kwaye njengoko idolophu nganye yayisenza amavoti abavoti, i-icon kwimephu emele idolophu yatshintsha ukubonisa imibala ethile ehambelana neqela lezopolitiko eliphumeleleyo.
“Njengoko iziphumo zingenile, kwafuneka siqiniseke ukuba 'siyapeyinta' idolophu ngombala ochanekileyo. Kuba iseti yayiyi-50 ipesenti yokwenyani kunye ne-50 yepesenti ebonakalayo, sibeka izikhombisi kumgangatho ukuze umbonisi angayekeleli nayiphi na imizobo yemephu eboniswayo. Kwicala lemephu, sasinemizobo eyongezelelweyo kunye nobuso babagqatswa kunye nenani leevoti abaziphumeleleyo. Kwakuxanduva olukhulu ukufumana eli lungelo, ngakumbi xa uhlala kwaye awukwazi ukwenza izilungiso kwiposi. I-Ultimatte mayiyeke umboniso-nkqubo ngaphandle komthungo emva kwezinto ezingabonakaliyo kwaye uzijikeleze ngaphandle komcimbi.
Kwakhona amandla osasazo yayiyisitudiyo seTV yeTV HD. I-WTVision iyisebenzisile ukubeka iliso kwiikhamera ezahlukeneyo kunye nokutshintsha ngokutyibilikayo phakathi kokudubula ngaphandle kokuphosa ukubetha. Unyulo lunamandla amakhulu, ke ngoko ukuhamba komsebenzi wethu losasazo bekubonakalisa oko ngokunjalo. Elula ukuyisebenzisa, kodwa icwecwe leTV yeTV yeTV HD Ingqineke iyeyona nto siyifunayo nangaphezulu. Ngombono ohlanganisiweyo ohlukeneyo, bekulula ngathi ukubona imizobo yethu yesiqhelo, isikrini esiluhlaza, nazo zonke ezinye izinto kwindawo enye, ”wongeze watsho uKossowski.
Ukujikeleza ukuhamba komsebenzi we-WTV ibiku-Desklink Quad 2 yokubamba kunye namakhadi okudlala awayesetyenziselwa imizobo yomoya kunye ne-AR. Ii-UltraStudio ezimbini HD Izixhobo zokubamba ezincinci kunye nokudlala kwakhona zasetyenziselwa ukufakelwa kunye nokukhupha ukulibaziseka kwezakhelo zekhamera ukwenzela ukuvumelanisa kunye nemizobo, kwaye ezinye ezimbini zasetyenziswa kuko konke ukugqabhuka kwemifanekiso. Iinguqu zeMicrosoft eziguqulweyo ezininzi ze-BiDirectional SDI /HDMI bezisetyenziselwa ukubeka iliso kuzo zonke iisiginali kunye nokugcina iividiyo, ngelixa iTeranex Mini SDI Distribution 12G yayisetyenziselwa ukusasaza ukondla kwenkqubo yokujonga.
“Ngokuqinisekileyo le yenye yeeprojekthi ezonwabisayo endikhe ndasebenza kuzo, kwaye ngokuqinisekileyo lolona xanduva lukhulu,” uqukumbele watsho uKossowski. "Ngonyulo, kufuneka unikezele ngohlaziyo ngexesha elifanelekileyo ngelixa lichanekile njengoko kungekho xesha lempazamo. Ndidinga amagiya endinokuthembela kuwo ukuba ayizukundilahla nangayiphi na indlela ngexesha losasazo, kwaye ndiyazi ukuba siza kuphumelela Blackmagic Design ukuxhasa ukuhamba kwethu. ”
Iifoto zemveliso ze-Ultimatte, Studio yeTV yeTV HD, I-DeckLink Quad 2, i-Micro Converter BiDirectional SDI /HDMI, I-UltraStudio HD I-Mini, iTeranex Mini SDI Ukuhanjiswa kwe12G kunye nazo zonke ezinye Blackmagic Design iimveliso ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-wTVision yenza izisombululo zosasazo ezihlanganisiweyo ngokusekwe kuphuhliso lwesoftware, uphawu kunye noyilo, imisebenzi esebenzayo kunye nokukhutshwa okukhethekileyo kwabasebenzi. Inkampani yaba yenye yezona zinto ziphambili ngexesha kunye nemizobo yokudlalisa ezenzekelayo ngenxa yezisombululo zayo eziguqukayo kunye nolwazi olupheleleyo kwimimandla eyahlukeneyo ngaphakathi kwishishini. Ukusuka ngexesha elincinci losasazo ukuya kolunye ukhuphiswano olubaluleke kakhulu kwiplanethi, umbono we-wTV uthatha inxaxheba kumawaka osasazo minyaka le kwaye unamava kumazwe angaphezu kwe-60. Izisombululo ze-WTV zemidlalo, ukugubungela unyulo, iinkqubo zokuzonwabisa kunye nokubhengezwa kweendaba, kunye neenkqubo zayo zokulawula eziphambili, ukhetho olukhethileyo lweeTV ezinkulu kunye nabavelisi kwihlabathi liphela.
Ifilimu eyoyikisayo "Ixesha lokuCoca" Isebenzisa uyilo lweBlackmagic kwimveliso kunye neposti - Oktobha 20, 2020
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Nyaniso eyongeziweyo Blackmagic Design uyilo lwe-blackmagic ultimatte Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Cobalt Encoder ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Unyulo lwePanama mveliso SJGolden - Imikhonto kunye neentolo IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji TVU Networks Injini yeVidiyo iTV 2019-08-13
Previous: Ukushukuma kwePodcast 2019 Kumboniso
next: IiColonie Garners ezimbini zeTelly yeeMbasa ye-Adert ​​ye-Vertical Ad Campaign